Tsy fahampian'ny vitamin A
Sambany vao nihinana vitamin A ny moka, noho izany dia nahazo ny carotenoïde io vondrona io - avy amin'ny teny anglisy hoe "carrot", izay midika hoe carrot. Ankehitriny, misy loko marevaka, loko marevaka, vitamin A dia mifandray amintsika. Andao hiresaka momba ny tsy fisian'ny vitamin A sy ny vokatr'izany.
Ny soritr'aretina voalohany dia "fahajamban'ny alina". Ampidiro ny efitrano misy hazavana mamirifiry ao anaty haizina ary jereo ny faharetan'ny masonao manoloana ny haizina:
Ao anatin'ny segondra vitsy - miaraka amin'ny retinol ianao dia marina avokoa;
Tokony ho 10 segondra eo ho eo dia soritr'aretina tsy fahampian'ny vitamin A;
20 segondra na mihoatra - tsy mila mieritreritra afa-tsy ny vitaminina fanampiny ianao, fa tokony hanao fotoana miaraka amin'ny mpitsabo ihany koa.
Ity fanandramana ity dia mampiseho fa ny tsy fisian'ny vitamin A dia voafaritra mazava amin'ny toetran'ny fahitana. Ny karazana mpitsikilo tsara ihany koa dia ny hoditra amin'ny volo - vehivavy maro no manasitrana hoditra maina sy volo voatsabo ho an'ny vokatra azo antoka momba ny fitsaboana na fiovana mifandraika amin'ny taona. Raha ny marina, tsy misy vitamina ny vatany.
Fa tsy ny hamamin'ny hoditra ihany, retinol. Ny teboka mifamatotra amin'ny andraikiny. Noho izany, dia afaka mampiditra ny kibay ao amin'ny taova anatiny ianao, anisan'izany ny fantsona boron-tena, ary, araka izany, ny fihenan'ny bwonchitis sy ny asmma.
Toy ny tsy fahampian'ny vitaminina hafa, ny marika iray amin'ny tsy fahampian'ny vitamin A dia:
Mandreraka haingana, mampihena ny fahaiza-miasa;
ny tsy fisian'ny faniriana hanao firaisana.
Mameno ny balan'ny vitamin A isika
Miaraka amin'ny ratsy, saingy tsy fampodiana mahatsiravina, dia hitodika amin'ny fomba ahafahantsika mameno ny tsy fahampian'ny vitamina A. Voalohany indrindra, andeha horesentsika ny fifandraisany amin'ny micro microelement.
Ny vy sy ny zinc dia mpiara-miombom-panafody vitamin A. Ny vitamin A, mba hanamafisana ny vitamin A, ny karyotinina dia atambatra sy atolotra ho an'ny sela, mila ilainao ny vitaminina A.
Vitaminina E - satria mitovy ny asan'ireo vitaminina roa ireo, dia mitovy ihany koa ireo soritr'aretina. Noho izany, raha tsy azonao antoka izay tena tsy hita aminao, alaivo ny voka-dratsin'ny vitamin A sy E.
Ny loharano tsara indrindra amin'ny vitamin A dia ny atin'ny trondro sy ny menaka trondro , ary koa ny retinol maro amin'ny atin'ny ronono, ny ebony, ny ronono, ny fofom-barimbazaha, ny dibera, ny crème sy ny tsaramaso. Provitamin A - carotene dia hita ao amin'ny sakafon'ny zavamaniry - abriko, paiso, tsaramaso, spinach, carrot, peas, dipoavatra, broccoli.
Na dia izany aza, mba hananana vitamin A avy amin'ny vokatra legioma, ilaina ny handevona ny sakafo amin'ny endrika mangahazo.
Fihetsiketsehana - tsara sy ratsy
Ireo vokatra mampiroborobo fofona
Sakafo nohosorana - fananana ilaina
Inona no manimba ny doshyrak?
Firy karazana inona no misy ao amin'ny abiko?
Goiana Goji dia tsara sy ratsy, ahoana no atao?
Inona no mahasoa amin'ny atin'akoho?
Ahoana no tsy ahafahan'ireo tia ho tsara kokoa?
Ny lela miteny
Fanomanana rolls ao an-trano
Sotro aroboka amin'ny ririnina any an-trano
Fanomezana ho an'ny renibeko
Lamb kebab avy amin'ny saka
Mandroaka menaka ve ny grapefruit?
Amin'ny inona ny manao akanjo jiro?
Vita amin'ny vato
Ny Marion Cotillard, izay bevohoka, dia navoaka niaraka tamin'i Guillaume Cane
Afaka bevohoka ve ny melon sy ny melon?
Kitapo fandroana zaza vao teraka
Fanampiana mahomby amin'ny hatsiaka sy ny gripa
Slate on a wedge